ဗိုလ်ကြီး Yahya နေထိုင်သူများဓါတ်ရထားလိုင်းချင်ပါဘူး - rayhab ဖြစ်ပါသည်
[13 / 09 / 2019] TCDD သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအရာရှိချုပ်-Sen မြှင့်တင်ရေးန်ထမ်းဝယ်လိုအားပမာဏကိုတိုးမြှင့်	06 တူရကီ
HomeတူရကီMarmara ဒေသကြီး41 Kocaeliဗိုလ်ကြီး Yahya နေထိုင်သူများဓါတ်ရထားလိုင်းချင်ပါဘူး
09 / 09 / 2019 Levent Elmastaş 41 Kocaeli, ရထားလမ်း, အထွေထွေ, မြို့ပြရထားစနစ်များ, Marmara ဒေသကြီး, တူရကီ, ဓါတ်ရထား 0
စွပ်စွဲလမ်းရထားလိုင်းကိုနှင့် ပတ်သက်. ဒေသခံများကအဆိုပါပျော်ပွဲစားမှာဒုတိယအကြိမ်တွေ့ဆုံခဲ့ပြီး Yahyakaptan မှတဆင့် run ပါလိမ့်မယ်
အဖြစ်လမ်းကြောင်းကိုယခုစက်ဘီးဖြစ်ရပ်များ၏နံပါတ်ကျင်းပခဲ့သောလမ်းရထားလိုင်းကိုလမ်းဖွင့်ဆောင်ခဲ့ကြလိမ့်မည်လမ်းလျှောက်ရှေ့တော်၌နေစဉ်အတွင်းအဘို့, ရပ်ကွက်အတွင်းမှာရှိတဲ့ဗိုလ်ကြီး Yahya ရပ်ကွက်အတွင်းနေထိုင်သူများလူသိများသည်။ ဤအခြေအနေတွင်မှာတော့ရပ်ကွက်အတွင်းနေထိုင်သူများတစ်ပျော်ပွဲစားအဖှဲ့အစညျးကိုဖန်ဆင်းခဲ့သည်။ Yahya Kaptanlılıဒုတိယပျော်ပွဲစားအတွက်သဘောပေါက်ခဲ့ကြသည်။ ဒေသခံများနေအိမ်မှဆောင်ခဲ့အစားအသောက်နှင့်အတူကျယ်ပြန့်ပါဝင်ပတ်သက်မှုပေးပျော်ပွဲစားမှာနံနက်စာရှိခဲ့ပါတယ်။
ဟိုတယ်တွင်နံနက်စာသုံးဆောင်ပြီးနောက်ဗိုလ်ကြီး Yahya ဒီတောင်တက်လမ်းကို Yahya အချက်တစ်ခုဖြစ်သည်နှင့်ဗိုလ်ကြီးရပ်ကွက်အတွင်းစက်ဘီး "ပလက်ဖောင်းပညတ်တော်မျှော်လင့်ပါတယ်ကိုအားလုံးကိုယ်စားကြေညာချက်ဖန်ဆင်းတော်မူ၏။ ယခင်ကဤနေရာတွင်သင်ယူလမ်းရထားလိုင်းကိုကူးသွားငါတို့သည်နှင့်ဆက်စပ်သောလုပ်ငန်းဆောင်တာများစွာကိုလုပ်ပါလိမ့်မယ်။ ဤအခြေအနေတွင်မှာတော့ကျွန်တော်တစ်ဦးလက်မှတ်ကမ်ပိန်းစတင်ဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။ ကျနော်တို့လက်ရှိလက်မှတ်ပေါင်း4တထောင်-ထူးဆန်းစုဆောင်းနေကြသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ရည်မှန်းချက်7တထောင်လက်မှတ်ပေါင်း။ ကျနော်တို့မြို့မန်နေဂျာခန့်အပ်မေတ္တာရပ်ခံပေမယ့်အဖြေမရကြဘူး။ တစ်ဦးအလုပ်အကိုင်အဖြစ်ကျနော်တို့အခန်းပေါင်းတွေ့ဆုံအတွက်စေပြီ။ ကြှနျုပျတို့သညျဤစီမံချက်၏နောက်ဆုံး version ကိုထိခိုက်ပျက်စီးမှုကိုဖော်ပြရန်လိမ့်မယ်ခံယူသည်အထိ projec ၏လျှောက်လွှာကျွန်တော်တို့ရဲ့လှုပ်ရှားမှုများဆက်လက်။ ဤလမ်းကြောင်းသည်ကျနော်တို့ကပြင်ဆင်ထားစီမံကိန်းကိုသည်အထိတိုက်ထုတ်မှသာဆက်လက်ပါလိမ့်မယ်, အခြားဒေသကနေလျှောက်လွှာဖြတ်သန်းသွားမည်ဖြစ်သည်။ ကျနော်တို့ဝန်ဆောင်မှုဆန့်ကျင်နေကြသည်မဟုတ်။ ကျနော်တို့ရထားလမ်းစနစ်ကဆန့်ကျင်နေကြသည်မဟုတ်။ ကျနော်တို့ကဒီဧရိယာကာကွယ်ချင်တယ် "ဟု၎င်းကပြောသည်။ (Kocaeli ငြိမ်းချမ်းရေးဆုသတင်းစာ)
ပြည်သူ့ဗိုလ်ကြီး Yahya '' ကျနော်တို့ကလမ်းရထားဘို့သစ်သားဖြတ်ချင်ကြဘူး '' 22 / 07 / 2019 ပြည်သူ့ဗိုလ်ကြီး Yahya '' ကျနော်တို့ကလမ်းရထားဘို့သစ်သားဖြတ်ချင်ကြဘူး '' ။ Akçaray Yahya သစ်ကိုလမ်းကြောင်းအတွက်သစ်ပင်များခုတ်လှဲချင်ခဲ့ပါဘူးဗိုလ်ကြီးရပ်ကွက်အတွင်းနေထိုင်သူများအတွက်အကောင်အထည်ဖော်ပါလိမ့်မည်သည့်လမ်းလျှောက်လမ်းကြောင်းကိုနှစ်သစ်ပင်သွားဒေသတွင်း၌ 20 အသုံးပြုနေထိုင်သူများ၏ဒုတိယအဆင့်တွင်ဓါတ်ရထားထွက်ကိုခေါ်မြှို့နယ်တစ်သောအဘို့ကိုဖြတ်ရန်ရှိသည်မှအတူတကွတုံ့ပြန်မှုနေထိုင်သူများအတွက်မြို့ပြတောင်းဆိုခရီးစဉ်အပြောင်းအလဲရောက်လာတယ်။ အသစ်ကလမ်းရထားလမ်းကြောင်းပေါ်တွင်အာရုံစူးစိုက်မှုကိုဆွဲဆောင်ရန် Yahya ကပ္ပတိန် "ပေါ်တွင်နံနက်စာ, အ thermos ဖမ်းပြီးလာ" ဟုအဆိုပါသစ်ပင်များအောက်မှာပျော်ပွဲစား၏ဆောင်ပုဒ်ဖြစ်ခဲ့သည်။ မြို့တော်ဝန်, ကောင်း CHP တဲ့ Metropolitan မြူနီစီပယ်ကောင်စီဝင်Özmural Unal, အသိအမြင်ဗိုလ်ကြီး Yahya Ahmed ကMirzaoğluပြုစုပျိုးထောင်ဖို့ဖြစ်ရပ်ဖွဲ့စည်း ...
ဗိုလ်ကြီး Yahya လက်သမား Multi-ဝေဒနာသည် 26 / 04 / 2016 ဗိုလ်ကြီး Yahya လက်သမား Multi-ဝေဒနာသည်: ဒါဟာပေါ်လာတာဟာအရင်ကားမောင်း pisses စတင်. အထူးသဖြင့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းနာရီအတွင်း, နိုင်ငံသားများအဘို့မြို့ပြစီမံကိန်းကိုအတွက်အသွားအလာပြဿနာများတိုးပွားလာဘို့ Kocaeli တဲ့ Metropolitan မြူနီစီပယ်ရဲ့ယခုအခြားအားလုံးမြန်နှုန်းအများကြီးအသုံးမအလုပ်လုပ်သောလူသိများသည်။ အဆိုပါစီမံကိန်းကိုနိုင်ငံသားတွေ, များစွာသောကိစ္စရပ်များတွင်အရောင်းအများ၏သားကောင်တစ်ဦးပြတ်လပ်မှုမသာဖြစ်ပါသည်။ လမ်းရထားကျင့်သောအကျင့်ကြောင့်ဝေဒနာသည်အတွက်ဗိုလ်ကြီး Yahya Erkan Koncu အာဇာနည်နေ့လမ်းဈေးရောင်း။ Ergun Koncu အာဇာနည်နေ့လမ်းဈေးရောင်းပေးနေတာဤဝေါဟာရများအတွက်ထုတ်ဖော်ပြောဆို: "သူတို့ကလမ်းရထားဖြင့်ဖုံးလွှမ်းလမ်းပေါ်မှာတူးဖော်အလုပ်ကိုပြု၏။ ထိုသူတို့သည်မိမိတို့အလုပ်မလုပ်ပါဘူး, တူးဖော်ဧရိယာဖွင့်ထားခဲ့တယ်။ သူတို့ကလမ်းပေါ်မှာ၏ဝင်ပေါက်နှင့်ထွက်ပေါက်ပိတ်ပါ။ တစ်နေ့အလုပ်လုပ်ကိုင်, ဒါပေမဲ့သူတို့ကျင့်ကိုကျင့်လျှင်3အထွက်ပြီးဆုံး ...
ဗိုလ်ကြီး Yahya အားလုံးပလက်ဖောင်း
ဗိုလ်ကြီး Yahya ရပ်ကွက်အတွင်း
ဘာကူမီးရထားဆောက်လုပ်ရေးKapıkuleမြန်ပိတ်အချိန် Begin မှ
အဆိုပါ Kop နှင့် Broken ဥမင်လိုဏ်လမ်းများ 2021 Service ကိုဖွင့်လှစ်ဖို့တစ်နှစ်တာ
Sekmen '' သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး 'နဲ့' အသုံးပြုနိုင်စွမ်း '' ကိုအဓိကထား၏ဥက္ကဋ္ဌ
သမိုင်းပိုး Erzurum သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအကျိုးကျေးဇူးများအပေါ်တွေ့ရှိရ
ပြည်သူ့ဗိုလ်ကြီး Yahya '' ကျနော်တို့ကလမ်းရထားဘို့သစ်သားဖြတ်ချင်ကြဘူး ''
ဗိုလ်ကြီး Yahya လက်သမား Multi-ဝေဒနာသည်
ဗိုလ်ကြီး Yahya လမ်းသွားလမ်းလာ Interchange များအတွက်အလွန်အန္တရာယ်
TOKI ဓါတ်ရထား Row အိမ်များနေထိုင်သူများစေချင်
သတင်းများ Archive လကိုရွေးချယ်ပါ စက်တင်ဘာလ 2019 (244) သြဂုတ်လ 2019 (507) ဇူလိုင်လ 2019 (634) ဇွန်လ 2019 (504) မေလ 2019 (526) ဧပြီလ 2019 (418) မတ်လ 2019 (521) ဖေဖော်ဝါရီလ 2019 (483) ဇန်နဝါရီလ 2019 (502) ဒီဇင်ဘာလ 2018 (620) နိုဝင်ဘာလ 2018 (504) အောက်တိုဘာလ 2018 (435) စက်တင်ဘာလ 2018 (517) သြဂုတ်လ 2018 (486) ဇူလိုင်လ 2018 (506) ဇွန်လ 2018 (581) မေလ 2018 (467) ဧပြီလ 2018 (545) မတ်လ 2018 (554) ဖေဖော်ဝါရီလ 2018 (500) ဇန်နဝါရီလ 2018 (557) ဒီဇင်ဘာလ 2017 (509) နိုဝင်ဘာလ 2017 (427) အောက်တိုဘာလ 2017 (538) စက်တင်ဘာလ 2017 (455) သြဂုတ်လ 2017 (505) ဇူလိုင်လ 2017 (479) ဇွန်လ 2017 (477) မေလ 2017 (493) ဧပြီလ 2017 (434) မတ်လ 2017 (540) ဖေဖော်ဝါရီလ 2017 (477) ဇန်နဝါရီလ 2017 (538) ဒီဇင်ဘာလ 2016 (487) နိုဝင်ဘာလ 2016 (631) အောက်တိုဘာလ 2016 (657) စက်တင်ဘာလ 2016 (541) သြဂုတ်လ 2016 (608) ဇူလိုင်လ 2016 (485) ဇွန်လ 2016 (661) မေလ 2016 (664) ဧပြီလ 2016 (700) မတ်လ 2016 (804) ဖေဖော်ဝါရီလ 2016 (855) ဇန်နဝါရီလ 2016 (751) ဒီဇင်ဘာလ 2015 (799) နိုဝင်ဘာလ 2015 (640) အောက်တိုဘာလ 2015 (624) စက်တင်ဘာလ 2015 (428) သြဂုတ်လ 2015 (493) ဇူလိုင်လ 2015 (505) ဇွန်လ 2015 (535) မေလ 2015 (577) ဧပြီလ 2015 (622) မတ်လ 2015 (1017) ဖေဖော်ဝါရီလ 2015 (878) ဇန်နဝါရီလ 2015 (1077) ဒီဇင်ဘာလ 2014 (963) နိုဝင်ဘာလ 2014 (826) အောက်တိုဘာလ 2014 (771) စက်တင်ဘာလ 2014 (598) သြဂုတ်လ 2014 (808) ဇူလိုင်လ 2014 (911) ဇွန်လ 2014 (735) မေလ 2014 (957) ဧပြီလ 2014 (972) မတ်လ 2014 (864) ဖေဖော်ဝါရီလ 2014 (720) ဇန်နဝါရီလ 2014 (733) ဒီဇင်ဘာလ 2013 (664) နိုဝင်ဘာလ 2013 (656) အောက်တိုဘာလ 2013 (548) စက်တင်ဘာလ 2013 (570) သြဂုတ်လ 2013 (533) ဇူလိုင်လ 2013 (661) ဇွန်လ 2013 (577) မေလ 2013 (734) ဧပြီလ 2013 (1059) မတ်လ 2013 (1102) ဖေဖော်ဝါရီလ 2013 (811) ဇန်နဝါရီလ 2013 (906) ဒီဇင်ဘာလ 2012 (911) နိုဝင်ဘာလ 2012 (1168) အောက်တိုဘာလ 2012 (830) စက်တင်ဘာလ 2012 (886) သြဂုတ်လ 2012 (976) ဇူလိုင်လ 2012 (863) ဇွန်လ 2012 (591) မေလ 2012 (445) ဧပြီလ 2012 (563) မတ်လ 2012 (699) ဖေဖော်ဝါရီလ 2012 (546) ဇန်နဝါရီလ 2012 (417) ဒီဇင်ဘာလ 2011 (149) နိုဝင်ဘာလ 2011 (35) အောက်တိုဘာလ 2011 (23) စက်တင်ဘာလ 2011 (18) သြဂုတ်လ 2011 (25) ဇူလိုင်လ 2011 (18) ဇွန်လ 2011 (16) မေလ 2011 (13) ဧပြီလ 2011 (13) မတ်လ 2011 (33) ဖေဖော်ဝါရီလ 2011 (24) ဇန်နဝါရီလ 2011 (13) ဒီဇင်ဘာလ 2010 (335) နိုဝင်ဘာလ 2010 (12) အောက်တိုဘာလ 2010 (15) စက်တင်ဘာလ 2010 (12) သြဂုတ်လ 2010 (16) ဇူလိုင်လ 2010 (9) ဇွန်လ 2010 (19) မေလ 2010 (6) ဧပြီလ 2010 (3) မတ်လ 2010 (62) ဖေဖော်ဝါရီလ 2010 (303) ဇန်နဝါရီလ 2010 (1838) ဒီဇင်ဘာလ 2009 (4) နိုဝင်ဘာလ 2009 (1) အောက်တိုဘာလ 2009 (3) စက်တင်ဘာလ 2009 (3) သြဂုတ်လ 2009 (2) ဇွန်လ 2009 (3) မေလ 2009 (2) ဧပြီလ 2009 (3) မတ်လ 2009 (9) ဖေဖော်ဝါရီလ 2009 (4) ဇန်နဝါရီလ 2009 (3) နိုဝင်ဘာလ 2008 (1) အောက်တိုဘာလ 2008 (1) စက်တင်ဘာလ 2008 (2) သြဂုတ်လ 2008 (1) ဇူလိုင်လ 2008 (2) ဇွန်လ 2008 (2) မေလ 2008 (2) ဧပြီလ 2008 (1) မတ်လ 2008 (3) ဖေဖော်ဝါရီလ 2008 (5) ဇန်နဝါရီလ 2008 (2) ဒီဇင်ဘာလ 2007 (2) အောက်တိုဘာလ 2007 (2) ဇူလိုင်လ 2007 (1) မေလ 2007 (1) ဧပြီလ 2007 (1) ဖေဖော်ဝါရီလ 2007 (2) ဇန်နဝါရီလ 2007 (1) ဒီဇင်ဘာလ 2006 (1) အောက်တိုဘာလ 2006 (3) သြဂုတ်လ 2006 (1) ဇွန်လ 2006 (2) မေလ 2006 (2) ဧပြီလ 2006 (2) မတ်လ 2006 (2) နိုဝင်ဘာလ 2005 (2) သြဂုတ်လ 2005 (1) ဇွန်လ 2005 (1) မတ်လ 2005 (2) ဖေဖော်ဝါရီလ 2005 (1) ဇန်နဝါရီလ 2005 (1) ဒီဇင်ဘာလ 2004 (1) အောက်တိုဘာလ 2004 (3) ဇူလိုင်လ 2004 (1) မေလ 2004 (2) ဒီဇင်ဘာလ 2003 (1) အောက်တိုဘာလ 2003 (1) မေလ 2003 (1) မတ်လ 2003 (1) ဖေဖော်ဝါရီလ 2003 (1) ဇန်နဝါရီလ 2003 (1) ဒီဇင်ဘာလ 2002 (1) အောက်တိုဘာလ 2002 (4) သြဂုတ်လ 2002 (1) ဧပြီလ 2002 (1) မတ်လ 2002 (2) ဇန်နဝါရီလ 2002 (2) ဇူလိုင်လ 2001 (1) ဇွန်လ 2001 (1) မတ်လ 2001 (1) မေလ 2000 (3) မတ်လ 1999 (1) အောက်တိုဘာလ 1998 (2) မတ်လ 1998 (1) သြဂုတ်လ 1997 (1) အောက်တိုဘာလ 1996 (1) သြဂုတ်လ 1996 (2) မေလ 1995 (1) သြဂုတ်လ 1992 (1) မေလ 1990 (1)